Mar noCamiño. Ibhafu, amathafa kunye nembono yolwandle. - I-Airbnb
Mar noCamiño. Ibhafu, amathafa kunye nembono yolwandle.
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguCasa De Carmen
UCasa De Carmen yi-Superhost
Indawo yokuhlala yaseMar no Camiño ibekwe kwindawo yeCamiños Cháns, ekamasipala waseCee, eCamino de Santiago ukuya eFisterra naseMuxía.
Ukusuka kuMar no Camiño kwaye ecaleni kwendlela yedolophu siyakufika kulwandle lwaseQunxe, olukumgama ozimitha ezili-1000.
IMar no Camiño, ligumbi eliqeshisayo eligcweleyo elikwiCamino de Santiago ukuya eMuxía, kwindawo yeCamiños Cháns (Cee).
Indlu encinci yabuyiselwa apho inxalenye yentsapho yayihlala kwixesha elidlulileyo kwaye ibekwe kwindawo engama-250 yemitha yesikwele ehonjiswe ngeegadi, iisipres, iidiliya, iintyatyambo kunye nefenitshala yangaphandle (i-lounger zelanga, iitafile kunye nezihlalo, i-pergola ... ).
Ngaphakathi inegumbi elinebhedi ebanzi eyi-1.50, igumbi lokuhlambela elipheleleyo, igumbi lokuhlala elinendawo yokubasa iinkuni, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nebhafu enemibono yechweba laseCorcubión.
Umbindi wedolophu yaseCee ungaphantsi kwekhilomitha ukusuka kwindlu. Ipromenade ikumgama weemitha ezili-100 kwaye ukuhamba kuyakusa eCee okanye eCorcubión. Kwezi dolophu kukho iikhefi, iivenkile ezinkulu, iimarike zikamasipala, iindawo zokubhaka, iindawo zentselo, iindawo zokudlala, iivenkile zempahla, iicawe, ii-ATM, ...
Umbuki zindwendwe ngu- Casa De Carmen
Sihlala kufutshane nendlu. Kodwa abathengi banobumfihlo obupheleleyo, kunye nomntu kunye nokungena okukhethekileyo kwipropathi. Unako kwakhona ukupaka imoto yakho ngaphakathi kwifama, siya kukunika ulawulo olukude ukuze uvule umnyango wokufikelela. Nawuphi na umbuzo ofuna ukusibuza wona, silapha ukuwusombulula.
Sihlala kufutshane nendlu. Kodwa abathengi banobumfihlo obupheleleyo, kunye nomntu kunye nokungena okukhethekileyo kwipropathi. Unako kwakhona ukupaka imoto yakho ngaphakathi kwifa…
Inombolo yomthetho: VUT-CO-1715
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cee